पाँच अनमोल दृष्टान्त | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार
पाँच अनमोल दृष्टान्त
आचार्य लक्ष्मण भण्डारी
२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार ०८:०१ गते
भगवान्को आँधीसँग किन डराउने ?
सृष्टि प्रकृतिको निरन्तर प्रवाहको नाम हो । निर्माण र विनाश, सम्पत्ति र विपत्ति अनि हर्ष र वियोग सबै प्राकृतिक नियमितताका नाम हुन् । प्रकृति जे छ, त्यो नै सत्य हो । अर्थात् प्रकृति वर्तमान हो र यो नै सत्य छ । जब हामी हिजो र भोलिका बारे सोच्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवन पनि दुःखपूर्ण हुन्छ । समयक्रममा घटित हरेक घटनाक्रमप्रति सन्तुष्टिभाव व्यक्त गर्नु नै मानसिक शान्ति प्राप्तिको उपाय हुनसक्छ ।
एक जना अंग्रेजी अधिकृत आप्mनी नवविवाहिता पत्नीका साथमा समुद्रको यात्रा गरिरहेका थिए । यसैक्रममा समुद्रमा भयङ्कर आँधी र तुफान आयो । जहाजका सबै यात्री डराए, चिन्तित भए । उनकी पत्नी पनि चिन्तित भइन् तर अधिकृत डराएनन् । कत्ति पनि विचलित नभई आँधी र तुफानमा पनि शान्त भएर बसे ।
अधिकृतकी व्याकुल पत्नीले भनिन्, “हैन तपाईं निश्चिन्त किन ? कसरी तपाईं शान्त बस्न सक्नु भएको ?” पत्नीको कुरा सुनेर उनले म्यानबाट तरबार झिकी पत्नीको टाउकोमा राखिदिए र हाँस्दै प्रतिप्रश्न गरे, “तिमीलाई डरलाग्यो कि लागेन ?” पत्नीले भनिन्, “ मेरो प्रश्नको उत्तर नदिएर यो के नाटक गर्नु भएको ? तपाईंको हातको तरबार देखेर म किन डराउने ? के तपाईं मेरा पति नभएर शत्रु हुनुहुन्छ र ? तपाईंले मलाई प्राणभन्दा धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भने म किन डराउने ?”
पत्नीको प्रतिक्रियापछि पतिले भने, ‘प्रिये ! मेरो हातमा तरबार भएजस्तै भगवान्को हातमा यो आँधी र तुफान छ । जसरी मसँग तिमीलाई डर लागेन, भगवान्को हातको आँधी र तुफानसँग किन डराउँछ्यौ ? भगवान् जे गर्नुहुन्छ, ठीकै गर्नुृहुन्छ भन्ने ठान । उहाँको व्यवस्थामा ढुक्क भएर बस र शान्तिको लामो सास फेर !’ जे हुन्छ, हुनुछ आखिर त्यो भएरै छाड्छ । त्यसैले प्रकृतिका हर घटनाहरुमा आनन्दित र सन्तुष्ट हुन सक्नु नै जीवन सार्थकताको नाम हो ।
जीवन एक धर्मशाला
जीमूतकेतु महान् ऐश्वर्य र वैभवले सम्पन्न नरेश थिए । देवराज इन्द्रको कठिन तपस्यापछि उनलाई कल्पवृक्ष प्राप्त भएको थियो । जीमूतकेतुको राजवैभव र महलको भव्यता देखेर देवताहरु पनि मुग्ध हुन्थे । जीमूतकेतु धार्मिक स्वभावका थिए । यति धार्मिक राजा सांसारिक वैभवमै हराएर मोक्ष प्राप्तिको मार्गबाट च्युत त हुने होइनन् ? भन्ने डर भगवान् दत्तात्रेयलाई लाग्यो ।
दत्तात्रेय मलिन वस्त्र धारण गरेर राजभवनमा प्रवेश गरे र पलङमा गएर बसे । यो देखेर राजाका सेवकहरु डराए । उनीहरुले पागलजस्तै भेषका दत्तात्रेयलाई त्यो पलङबाट हटाउने ठूलो प्रयत्न गरे तर सकेनन् । आपूm सुत्ने बिछ्यौनामा एक जना उन्मत्त भिखारीलाई देखेर राजा रिसले रातो—पिरो भए । क्रोधको आवेगमा राजा जीमूतकेतु ती भिखारीको अगाडि आएर बर्बराए, “तँ को होस् ? यो राजभवनमा कसरी पसिस् ? यहाँबाट तुरून्त निस्केर जा ।”
भिखारी कत्ति पनि आत्तिएनन् । निश्चिन्त भएर जीमूतकेतुतर्फ फर्कंदै उनले भने, “मित्र किन रिसाउँछौ ? यो त धर्मशाला हो । तिमी पनि बस, म पनि बस्छु । “यो त मेरो राजभवन हो , धर्मशाला होइन । बुझिस्” राजाले हप्काए ।
भिखारी भेषका दत्तात्रेयले भने, “त्यसो भए तिमी यहाँ कति हजार वर्षदेखि छौ ?” राजाले भने— “ए पागल ! मेरो आयु नै जम्मा ६० वर्षको भएको छ भने हजार वर्षको कुरा कसरी गर्न सकिस् ?”
दत्तात्रेयले फेरि सोधे, “तिमीभन्दा पहिला यो घरमा को थियो ?” “मेरा पिताजी”— राजाले जबाफ दिए । भिखारीले फेरि सोधे— “उहाँ कहाँ जानुभयो त ? कहिले फर्कनुहुन्छ ?” “राजाले जवाफ दिए— “उहाँको देहान्त भयो । उहाँ अब कहिल्यै फर्कनुहुन्न ।”
भिखारीस्वरुप दत्तात्रेयले यस्तै किसिमले प्रश्न गर्दै जाँदा राजाले राजभवनमा आफ्ना पितासहित धेरै पूर्वजहरु बसेको जानकारी दिए । दत्तात्रेयले हाँस्दै भने, “हे महानुभाव ! जहाँ मान्छे आउँछ, केही समय बस्छ र फेरि कहिल्यै नफर्कने गरी जान्छ, त्यो धर्मशाला नभएर अरु के हुन सक्छ ?”
हरेक मानिस धर्मशालाको यात्रुजस्तै हो, जो जीवनयात्राका क्रममा घररुपी धर्मशालामा आउँछ, बस्छ र नफर्कने गरी बिदा हुन्छ । के हामी पनि धर्मशालाका यात्रीभन्दा फरक छौँ र ?
लोभले तत्कालका लागि मान्छेलाई आनन्द र खुसी त देला तर अन्ततः यसको परिणाम घातक हुन्छ । ईष्र्या अर्थात् लोभ असहिष्णुताको नाम पनि हो । छरछिमेक वा इष्टमित्रहरुले गरेका उन्नति र प्रगतिमा सन्तुष्ट हुन नसक्नेहरु लोभ र ईष्र्या गरेर आफ्नो पतनको यात्रा सुरू गर्दछन् ।
एउटा किसानको बगैँचामा अंगुरको रुख थियो । त्यस वृक्षमा प्रतिवर्ष मीठामीठा अंगुरका दानाहरु फल्ने गर्दथे । त्यसो त परिश्रमीहरु नै सम्पूर्ण सिद्धिका पात्र हुन्छन् । त्यसरी नै किसान पनि सन्तोषी, परिश्रमी र सत्यवादी थियो ।
उसले सोच्यो, “बगैँचा त मेरो श्रमको प्रतिफल हो, तर यो जमिन मेरो जमिनदारको हो । त्यसैले, यहाँ फलेका फलपूmल त्यो जमिनदारलाई पनि केही न केही दिनुपर्छ र बाँडीचुँडी उपभोग गर्नुृपर्छ अन्यथा ईश्वरका अगाडि म लज्जित हुनुपर्ने छ ।” त्यसपछि त्यस किसानले जमिनदारलाई मीठामीठा अंगुर पठाउन सुरू ग¥यो ।
उता जब मीठो अंगुरको स्वाद लिने मौका पायो, जमिनदारले सोच्न थाल्यो, “अंगुरको बिरूवा त मेरो जमिनमा छ । त्यसैले, त्यसमा मेरो पूरा अधिकार छ । म त्यो अंगुरलाई उखेलेर मेरो बगैँचामा ल्याई रोप्छु ।” यति सोचेर उसले आप्mना नोकरहरुलाई पठाई बिरूवा उखेलेर आफ्नो बगैँचामा ल्याई रोप्न लगायो । नोकरहरुले आज्ञापालन गरेर नयाँ बगैँचामा रोपे । बिचरा किसान असहाय थियो । उसले हेरेर बस्नुबाहेक केही गर्न सकेन ।
तर, त्यसरी रोपिएको अंगुरको बोटले फल त दिएन नै केही दिनमै सुखेर मरेर गयो । लोभको कीराले अंगुरको त्यति राम्रो बिरूवालाई जरैदेखि निर्मूल गरेर छाड्यो ।
लोभ त विनाशको प्रतीक हो । यदि संसारमा विनाशैविनाश र कुरुपता नै कुरुपता छ भने त्यसको कारण अरु केही नभएर लोभ र ईष्र्या नै हो ।
भनिन्छ “सङ्गतो जायते फलम्” अर्थात् सङ्गतको फल अवश्य प्राप्त हुन्छ । यदि सत्पात्रसँग बसउठ हुन्छ र कुराकानी हुन्छ भने त्यो सत्सङ्ग बन्दछ, तर कुपात्र अर्थात् बदमाससँग हिँडडुल र बसउठ हुन्छ भने त्यो जीवनभरका लागि दुष्परिणामदायक बन्दछ । जस्तो वातावरण छ, जस्ता मान्छेसँगको सङ्गत छ र जस्ता मान्छेहरुको साथ प्राप्त छ हामी त्यसैअनुसारको फलका भागी हुन्छौँ ।
कुनै राजा वनमा सिकार गर्दै थिए । सिकार गर्दागर्दै थकित भएर उनी एउटा वृक्षको छायामुनि विश्राम गरिरहेका थिए । वृक्षको हाँगामा पहिल्यैदेखि एउटा काग आएर बसिरहेको थियो । संयोगवश एउटा राजहाँस पनि उड्दै आयो र काग बसेको हाँगामै बस्यो ।
काग त स्वभावैले चञ्चल हुन्छ, चकचके हुन्छ । त्यसले अनायासै विष्टा (दिसा) ग¥यो । कागले गरेको विष्टा तल सिकारी राजाको टाउकोमाथि पुग्यो । राजालाई रिस उठयो । उनले क्रोधमा आएर धनुर्वाण चलाए र कागलाई ताकेर प्रहार गरे । तर काग चतुर थियो, उड्यो, वाण नजिकै बसेको हाँंसलाई गएर लाग्यो । वाणको प्रहारले मूच्र्छित हाँस तल भुइँमा पछारियो ।
राजाले आश्चर्यका साथमा भने, “अहो ! के यो वनमा सेता कागहरु पनि बस्छन् ?” मर्दै गरेको हाँसले जवाफ दियो, “महाराज ! म काग होइन । म त मानसरोवरको हाँस हुँ, तर केही समय मात्र कागको नजिक बस्नुको नमीठो फल आज मलाई प्राप्त भयो ।”
दुष्टहरु यस्तै हुन्छन् । उनीहरुको बदमासीको परिणाम भद्र, सज्जन र इमानदारहरुले भोग्नुपर्छ । कौवाजस्ता धूर्तहरुसँग एकैछिन बस्दा पनि जीवन गुम्न सक्दोरहेछ भने किन उनीहरुको निरन्तर सङ्गत गर्ने ? त्यसैले “जस्तो सङ्गत त्यस्तै परिणाम” भनिएको हो ।
उपदेशका लागि योग्यता
एक जना व्यक्तिले आफ्नो ७ वर्षको छोरोलाई एक महात्माकहाँ लिएर गए र उनीसँग भने, “हे महात्मा ! मेरो छोराले दैनिक ५ रूपैयाँको मिस्री खाने गर्छ । यदि मिस्री नदिने हो भने झगडा गरेर हैरान पार्छ । कृपया, तपाईंसँग कुनै उपाय छ भने यसलाई यो बानीबाट मुक्त गरिदिनुस् ।” महात्माले भने, “ठीक छ, त्यसो भए यसलाई एक महिनापछि लिएर आउनुस्, म ठीक पार्छु ।” ती व्यक्तिले एक महिनापछि त्यो बालकलाई जब महात्माकहाँ लिएर गए महात्माले उसलाई अत्यन्त प्रिय र मायालु शब्दमा सम्झाए, “बाबु हेर, तिमी यति राम्रो मान्छेले धेरै मिस्री खाएर दाँत नराम्रो पार्न हुन्छ त ? अबदेखि तिमी मिस्री पनि नखाऊ र झगडा पनि नगर ल !” यति भनेर उसलाई धाप मार्दै बिदा गरे । ठीक त्यही दिनदेखि बालकले दैनिक मिस्री खान बन्द ग¥यो ।
केही दिनपछि बालकका पिता महात्माकहाँ गए र आफ्नो छोरो अत्यन्त सज्जन र आज्ञाकारी भएको बताउँदै उनलाई धन्यवाद प्रकट गरे । महात्मासँग जिज्ञासा प्रकट गर्दै उनले सोधे— “महात्मा तपाईंको उपदेश साँच्चै नै सञ्जीवनीसमान रहेछ । तर, तपाईंले पहिलो दिनमै मेरो छोरोलाई उपदेश नदिएर किन एक महिनापछि बोलाउनुभयो ? यसको रहस्य के म जान्न सक्छु ?”
ती व्यक्तिको जिज्ञासा शान्त पार्दै महात्माले भने— “मित्र जो मनुष्य स्वयम् नियमको पालन गर्दैन र संयममा रहँदैन, उसले अरुलाई नियम र संयमको उपदेश कसरी दिन सक्छ ? म पनि तपाईंकै छोरोजस्तै खानापछि मिस्री खाने गर्दथँे । मैले जब एक महिनासम्म मिस्री नखाने अभ्यास गरेर यो नराम्रो बानी हटाएँ अनि बल्ल तपाईंको छोरालाई बोलाएर उपदेश दिएँ । त्यो उपदेशले काम ग¥यो र तपाईंको छोराले पनि मिस्री खान र झगडा गर्न छोड्यो ।”
अरुलाई कुनै कुराको उपदेश दिनुपूर्व आपूmमा त्यस्तो किसिमको योग्यता छ÷छैन विचार गर्नुपर्दछ । यदि आपूmले नराम्रा काम गरिन्छ र अरुलाई त्यस्ता काम नगर्न उपदेश दिइन्छ भने त्यो उपदेशले काम गर्न सक्दैन । आपूmभित्र सत्वृत्तिको विकास नै उपदेशका लागि सबल योग्यता मान्न सकिन्छ ।
असल शिक्षणका ६ रहस्य [लक्ष्मणरेखा]
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति र विश्वव्यापी सूचकाङ्क
बिचौलियाका दबाबमा यथास्थितिमै अल्झिएको राजनीति
एचआइभी/एड्स रोकथाममा जुटौँ
आज डिसेम्बर १ अर्थात् ३३औँ विश्व एड्स दिवस । ‘सबैको संयुक्त प्रयासले एचआइभी नियन्त्रण र रोकथामका लागि अग्रसर बनौँ’ भन्ने...
गैँडा मृत्युबारे समितिले थाल्यो छलफल
हेटौँडा अस्पतालमा आइसियूसहित भेन्टिलेटर सेवा